बतास भन्छन्- देउवाको मान्छे हुँ, ओलीले ज्वाइँ भन्नुहुन्छ, ब्युरोक्रेसीमा त खेल्ने हो – Sudur Sanchar
बतास भन्छन्- देउवाको मान्छे हुँ, ओलीले ज्वाइँ भन्नुहुन्छ, ब्युरोक्रेसीमा त खेल्ने हो
पुष २४, २०७८ शनिबार 37
शक्तिका आडमा पशुपतिको धर्मशालालाई लज बनाएका, सेती नदीको ढुंगा–गिटी दोहन गरिरहेका र नारायणहिटी संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउन खोजेका आनन्दराज बतास भन्छन्–देउवाको मान्छे हुँ, ओलीले ज्वाइँ भन्नुहुन्छ, ब्युरोक्रेसीमा त खेल्ने हो
शक्तिका आडमा सार्वजनिक सम्पत्ति लिजमा लिएर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइरहेका व्यवसायी आनन्दराज बतासले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीसम्म आफ्नो पहुँच भएको बताएका छन् ।
आफू देउवाको मान्छे भएको र ससुराली झापा भएका कारण ओलीले आफूलाई ज्वाइँ भनेर सम्मान गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय विवादित तीनवटै ठेक्का आफूले ओली नेतृत्वकै सरकारका पालामा पाएको उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक शक्ति नजिक भएपछि कर्मचारीतन्त्रमा खेलेर आफूले व्यवसाय हात पारेको बतासको आशय छ । अरू व्यवसायीले पनि खेल्ने उनको भनाइ छ ।
‘ब्युरोक्रेसीमा को खेल्दैन ? ब्युरोक्रेसीमा त खेल्ने हो । के लुकाउनु छ तपाईंलाई ? ब्युरोक्रेसीमा ‘हजुर यसो गरौँ, त्यसो गरौँ’ नभनीकन पाउँछ कसैले ?’ उनको भनाइ छ ।
स्टिङ अप्रेसनमा बतासले आरोप लागेजसरी प्रधानमन्त्री देउवापत्नी आरजुको पैसा आफूले नचलाएको दाबी गरेका छन् । ‘सबैलाई थाहा छ– आनन्द बतास शेरबहादुर देउवाको मान्छे हो ।
देउवाको पैसा आनन्द बतासले चलाउँछ भन्छ मान्छेहरूले, एक रुपैयाँ प्रमाणित गरेर देखाओस् त ! मीनबहादुरलाई माओवादीको पैसा चलायो भन्छन्, सुमार्गीलाई पनि त्यसै भन्छन् ।
आरजु (प्रधानमन्त्रीपत्नी)को पैसा सबै मैले चलाउँछु भन्छन् क्या ! यस्तो सुन्दा मलाई दुःख लाग्छ,’ उनको गुनासो छ ।
यसरी दरबार छिरेको थियो बतास
बतास समूहले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नारायणहिटी परिसरभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउने ठेक्का पाएको थियो । १७ पुस ०७७ मा बतासको बिपिएस लिजिङ कम्पनी र संग्रहालय विकास समितिबीच भाडासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।
समितिले आह्वान गरेको टेन्डरमा बतासकै तीनवटा कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराएर सेटिङमै नारायणहिटी सुम्पिएको थियो । टेन्डरमा सहभागी बतास समूहभन्दा बाहिरको जोकर रेस्ट्रो तथा लन्जलाई भने प्राविधिक रूपमै असफल भएको भन्दै टेन्डर प्रक्रियाबाट हटाइएको थियो । सम्झौतामा बिपिएसले भवनको मासिक दुई लाख २१ हजार भाडा दिने र हरेक वर्ष १० प्रतिशत भाडा बढ्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पशुपति धर्मशाला बतासलाई दिएको विषयमा पनि छानबिन हुँदै
बतास अर्गनाइजेशनले पशुपतिको धर्मशालामा तारे होटेल सञ्चालन गरिरहेको विषयमा छानबिन गर्न पनि सििमत गठन गरिएको छ । धर्मशाला भारतको सहयोगमा बनाइएको थियो ।
पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिले सात दिनभित्रमा अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
शक्तिका आडमा पशुपतिमैत्री धर्मशाला लिएर गरेर बतास अर्गनाइजेशनले ‘होटेल आनन्द’ सञ्चालन गरिरहेको छ । होटेल परिसरमै भिन्टेज गाडीको सोरुम पनि राखिएको छ ।
बतास समूहले सेटिङ मिलाएर अत्यन्तै न्यून भाडा तिर्ने गरी धर्मशाला भाडामा लिएर होटेल सञ्चालन गरिरहेको र होटेलमा पनि मनपरी शुल्क असुल गरिरहेको आरोप लागेपछि सत्यतथ्य बुझ्न छानबिन समिति गठन गरिएका हो ।
प्राइम टेलिभिजनको स्टिङ अप्रेसनमा आनन्दराज बतास भन्छन्–
म शेरबहादुर देउवाको मान्छे हुँ । तर, मेरा तीनवटै काम केपी ओलीका पालामा भएका छन् नि ! कम्युनिस्टहरूले दिन्थे त मलाई ? टेन्डर निकाले, प्राविधिक रूपमा पास भएँ, मैले पाएँ त पाएँ ।
तपाईंलाई लाग्छ, कांग्रेसका वेला (सत्तामा रहेका वेला) कांग्रेसले मात्र पाउँछ, कम्युनिस्टका वेला कम्युनिस्टले मात्र पाउँछ ? यस्तो हुन्छ र दुनियाँमा ?
शेरबहादुर देउवाको पैसा आनन्द बतासले चलाउँछ भन्छ मान्छेहरूले, एक रुपैयाँ प्रमाणित गरेर देखाओस् त ! मीनबहादुरलाई माओवादीको पैसा चलायो भन्छन्, सुमार्गीलाई पनि त्यसै भन्छन् । आरजु (प्रधानमन्त्रीपत्नी)को पैसा सबै मैले
मेरो ससुराली भद्रपुर हो । ओलीजी (केपी ओली)ले मलाई ज्वाइँ भन्नुहुन्छ । तर, चार वर्ष भयो उहाँसँग भेट नभएको । कुनचाहिँ टेन्डर, वल्र्ड बैंकको होस् वा एडिबीको,
कुनै विक्रम पाण्डेलाई, कुनै अर्कोलाई त पर्ने हो नि हजुर ! मलाई सोध्नुपर्छ यार तपाईंहरूले ? कसरी पर्छ, तपाईंहरूलाई नै थाहा छ नि ।
Prevजापानमा कुकका रुपमा काम गर्दै आएका एक नेपालीको मृ’त्यु
Nextपरिक्षा छुटाएर पार्टीकाे कार्यक्रममा नाच्न लगियो विद्यार्थी
एक दिन बढी बिदा बसेको बहानामा कम्पनीले निकालिदिएपछि मलेसियामा नेपाली अलपत्र
शक्तिशाली ठेकेदार, सि डि ओ लाई समेत टेर्दैनन्,स्थानीयले बाटो बन्द गरिदिए
३.	चर्चित अभिनेत्री रायमा बन्द बोराभित्र शरिर दुई टु;;क्रा भएको अवस्थामा मृ;;त भे;;टिइन् (91)